FOOD THIS & THAT | Food Magazine Myanmar | Page 3
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် ဟိုတယ်၊ စားသောက်ဆိုင်များဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများ
by Chef Sunny for Food Magazine မြန်မာစားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချပညာရပ်များကို ‘‘Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ့ ‘‘Chefs Education Page’’ မှာ လစဉ် ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ ဒီလမှာလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အပါအဝင် အာဆီယံ ....
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး အပိုင်း (၅)
by Ko Win Zaw for Food Magazine ပြီးခဲ့တဲ့လက တင်ပြခဲ့တဲ့ မီးဖိုချောင်သုံးတွေအပြင် နောက်ထပ်ရှိသေးတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးကိုလည်း ရေးပေးမယ်နော်။ 33. Fry and Sauté Pan 34. Grill Pan (or) Griddle 35. ....
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးနှင့် အစားအသောက် ပြင်ဆင်တည်ခင်းမှု ကွပ်ကဲစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ စနစ်တကျဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်လာရန် လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပြီး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနည်းတူ စားသုံးသူတို့ စိတ်ချလက်ချ ယုံကြည်စွာ သုံးဆောင်လာနိုင်ရေးအတွက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားသင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်တည်ခင်းသော မိသားစုထမင်းဝိုင်းမှသည် အပြင်ထွက်ပြီး စားသောက်မှုပုံစံများပြောင်းလာပြီ ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ Food Safety and Hygiene ....
အားလုံးအတွက် ရင်ခုန်စရာ မီးဖိုချောင်ထဲမှ ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနည်းအကြောင်း ရေနွေးညသိပ် အဆိပ်ထက်ပြင်း (How Poisoning Letting Boiling Tea Over Night)
by Syi Lwin Foods Garden for Food Magazine ဒီလရဲ့ “ရင်ခုန်စရာ မီးဖိုချောင်ထဲမှ” က အားလုံးလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ရေနွေးကြမ်းအကြောင်း သိကောင်းစရာ လေ့လာမှတ်သားစရာတချို့ကို မျှဝေပေးပါရစေ။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရေနွေးကြမ်းကို ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးလောက် အာရှနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်တိုင်း၊ ....
မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းအမျိုးမျိုး အပိုင်း (၄)
by Ko Win Zaw for Food Magazine လစဉ်ရေးသားနေတဲ့ မီးဖိုချောင်သုံး ပစ္စည်းများမှ ကျန်ရှိသေးလို့ အသင့်တော်ဆုံး ပစ္စည်းများကို ထပ်မံတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒါကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့် မီးဖိုချောင်မှာ လုပ်မယ့်သူများအတွက် များစွာအထောက်အကူပြုမှာပါ။ ယခု ရေးသားတင်ပြမှာကတော့ 25. Refrigerator 26. Wok ....
by ဒေါ်စီစီဝင်း for Food Magazine အစားအစာများကို အာဟာရနည်းပညာဖြင့် ဆက်စပ်လေ့လာရာတွင် အာဟာရဓာတ်သည် အရေးပါသောကဏ္ဍတစ်ရပ်အဖြစ် ပါဝင်နေသဖြင့် လူတိုင်းသိရှိနားလည်စေရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခြေခံအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း၌ မဖြစ်မနေအသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် အနည်း၊ အများပမာဏမှာ – ပမာဏများစွာလိုအပ်သော အာဟာရဓာတ် ....
ပြိုင်တောင်မွှေးကြော်ချက် ရခိုင်ဟင်း ပြိုင်တောင်မွှေးဆိုတာက ဖလံတောင်ဝှေးကို ရခိုင်ဘက်ကခေါ်တဲ့ အခေါ်အဝေါ်ပါ။ ပြိုင်တောင်မွှေး (ခ) ဖလံတောင်ဝှေးက မိုးရာသီမှာသာပေါ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်မျိုးပါ။ သေးသေးနုနုဆိုရင် ဓားပြားရိုက်ပြီး ချက်ကြပေမယ့် နုနုထွားထွားကြီးတွေဆိုရင်တော့ ဓားနဲ့မထူမပါးလှီးပြီး ကြော်စား၊ ချက်စား ကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေ နှစ်ခြိုက်ကြတဲ့ ဒေသစာတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်သောပစ္စည်းများ ....
စားဖိုဆောင်သုံးကိရိယာများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအား သန့် စင်ခြင်းနှင့် ထိန်းသိမ်းခြင်း
by Chef Sunny for Food Magazine မြန်မာစားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချပညာရပ်များကို ‘‘Myanmar Chefs Development Centre’’ ရဲ့ ‘‘Chefs Education Page’’ မှာ လစဉ် ဖော်ပြပေးနေပါတယ်။ ဒီလမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတိုင်းမှာ ....
သွေးဖိအားကျစေရန် စီမံထားသော အစားအစာ (DASH Diet) နှင့် ခေတ်ပေါ်အစားအစာ (Modern Diet)
by စီစီဝင်း (Food) for Food Magazine အမေရိကန်နိုင်ငံသူ/သားများ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် အားလုံးကျန်းမာစေခြင်းကို ရည်ရွယ်ထားသည့် စားသုံးရန် ပုံစံပြုစီမံထားသောအစားအစာ (DASH Diet) ၏ ဖွင့်ဆိုချက်မှာ “The Dietary Approach to Stop Hypertension” ဖြစ်သည်။ ....
တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာတွေဟာ ချက်ပြုတ်ရာမှာ လွယ်ကူရိုးရှင်းပေမယ့် ဟင်းလျာအရသာတွေက မိမိတို့စားဖူးနေကျ အရသာများနဲ့မတူဘဲ ကွဲပြားခြားနားနေတာကြောင့် တခုတ်တရ စမ်းပြီး စားကြည့်ချင်ကြသူတွေ များပါတယ်။ အဓိကကတော့ ဒေသအတွင်းမှာသာ ထွက်ရှိတဲ့ သဘာဝသီးနှံနဲ့ သားငါးတွေရဲ့ ချိုမြိန်လတ်ဆတ်တဲ့ အရသာကလည်း အထောက်အကူပေးတာဖြစ်မှာပါလို့ စဉ်းစားမိပါတယ်။ စံလွင် (ငါးဦးစီး) ဆင်ခရမ်းသီး ....
နေပြည်တော် နို့ချက်စက်ရုံနှင့် နို့စားနွားမွေးမြူရေး သုတေသနခြံ (Nay Pyi Taw Dairy Farm)
ရန်ကုန် – မန္တလေးအမြန်လမ်း (၂၁၆ မိုင် ၅ ဖာလုံ) ရှိ နေပြည်တော် နို့ချက်စက်ရုံနှင့် နို့စားနွားမွေးမြူရေး သုတေသနခြံသို့ Myanmar C.P. Livestock Co., Ltd. ကုမ္ပဏီရဲ့ အစီအစဉ်ဖြင့် Food Magazine အပါအဝင် မီဒီယာများက ဇူလိုင်လ ....